LibreOffice 6.2.6 inodzivirira munhu ari kure anorwisa kuti asaite zvisina kukodzera kodhi | Linux Vakapindwa muropa
Vhiki ino, Iyo Gwaro Sisekelo yakatangwa LibreOffice 6.2.6. Iyo yepamusoro-yepamusoro-soro vhezheni parizvino ndeye v6.3 yesuti, asi iyo kambani inowanzo gadzira dzinenge mbiri shanduro dzatinowana: iyo nyowani nyowani iyo inosanganisira yazvino mashandiro uye yapfuura iyo yakagamuchira akati wandei ekugadzirisa ekugadzirisa uye yakagadzikana. Shanduro 6.2.6 ikozvino inokurudzirwa kuti ishandiswe pazvikwata zvekugadzira, kunyanya tichifunga kuti vakagadzirisa zvimwe zvakakanganisika zvekuchengetedza.
Chaizvoizvo, iyo "nyowani" vhezheni yakagadzirisa kukanganisa kwakati wandei, asi kune matatu awo akakosha kupfuura mamwe ese, zvekuti Canonical rakazviburitsa pane yavo yepamutemo chengetedzo peji peji. Sekureva kwekambani inomhanya naMark Shuttleworth, mabugs anokanganisa Ubuntu 19.04, Ubuntu 18.04 uye Ubuntu 16.04, kana chii chakafanana, shanduro dzese dzakatsigirwa muhupenyu hwavo hwepanyama.
LibreOffice 6.2.6 ikozvino ndiyo inokurudzirwa vhezheni yezvikwata zvekugadzira
Muzvinyorwa zveCanonical post tinoverenga kuti "Zvikanganiso zvakasiyana zvekuchengetedza" zvakagadziriswa muLibreOffice. Zvimwe zvakaringana, zvikanganiso zvitatu zvekuchengetedza ayo anogovera tsananguro:
CVE-20199850 y CVE-2019-9851- LibreOffice yakawanikwa kubata zvisizvo LibreLogo zvinyorwa. Kana mushandisi akanyengerwa kuti avhure gwaro rakagadzirwa zvine hungwaru, anorwisa ari kure anogona kukonzera LibreOffice kuita kodhi yekumanikidza.
CVE-2019-9852- LibreOfficce yakawanikwa kubata zvisirizvo zvinyorwa mumafaira egwaro. Kana mushandisi akanyengerwa kuti avhure gwaro rakagadzirwa zvine hungwaru, anorwisa ari kure anogona kuita kodhi yekumanikidza.
Iwo mavara anoshandiswa ndeye libreoffice-core - 1: 6.2.6-0ubuntu0.19.04.1 paUbuntu 19.04, libreoffice-core - 1: 6.0.7-0ubuntu0.18.04.9 paUbuntu 18.04 uye libreoffice-core - 1: 5.1.6 .2 ~ rc0-1ubuntu9 ~ xenial16.04 pane Ubuntu XNUMX. Iyo yekuvandudza zvatove zviripo mumahofisi epamutemo.
MuRibreOffice 6.2.6 manotsi ekuburitsa, Iyo Gwaro Sisekelo yakatiudza kuti yaive "iyo yechitanhatu diki kuburitswa mumhuri yeLibreOffice 6.2, yakanangana nevashandisi munzvimbo dzekugadzira. Vese LibreOffice 6.1.x uye 6.2.x vashandisi vanofanirwa kugadzirisa nekukurumidza kuvandudza chengetedzo, nekuti software yacho inosanganisira zvese zvidziviriro uye zvimwe zvinogadziriswa kubva mumwedzi yekupedzisira". Zvino, mushure mekuburitswa kweCanonical, isu tatoziva kuti nei vakasimbisa kuti tinofanira gadziridza nekukasira kuchengetedza kwedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » LibreOffice 6.2.6 inodzivirira anorwisa ari kure kuti asaite kodhi yekumanikidza